စွမ်းရည်:800~ 1200kg / h
Feed mixer စက်သည်အဓိကအဆင့်ဖြစ်သည် တောင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံကိုကျွေးမွေး အစာတောင့်များ၏အရည်အသွေးအပေါ်တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်. Feed ရောနှောစက်များသည်အမျိုးမျိုးသောကုန်ကြမ်းအမှုန့်များကိုအညီအမျှရောနှောရန်လုပ်ဆောင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်အရည်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာရောစပ်ရန်အတွက်အာဟာရအရည်များကိုထည့်ရန်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။. အလွန်အမင်းရောစပ်ပြီးနောက်, အရည်အသွေးမြင့်မားသောအစာကျွေးခြင်းလုံးလေးများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်လမ်းကိုပြင်ဆင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောရောနှောစက်များသည်စျေးကွက်တွင်လူကြိုက်များကြသည်။ ရောနှောခြင်းကတူအမှုန့်များ၏မာကျောမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်သံတူစက်မှအမှုန်အရွယ်အစား၏တူညီမှုကိုတိုးတက်စေသည်။, အရာကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတိုးတက်စေ. ထို့ကြောင့်ကျွဲနွားအစာရောနှောစက်သည်အရေးကြီးသောကိရိယာဖြစ်သည် တောင့်ထုတ်လုပ်မှုအစာကျွေး. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှကမ်းလှမ်းသောတစ်ခုတည်းသောရိုးနှင့်အမွှာဖဲကြိုးဖြင့်ကျွေးမွေးသောအရောအနှော, ထို့အပြင်ဖဲကြိုး Blender အမည်ရှိ, အဓိကအားဖြင့်ပေါင်းစပ်အစာအရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်အမှုန့်အစာကျွေးသောပစ္စည်းများရောနှောရန်အသုံးပြုသည်. ဒီကြက်ဘဲအစာရောနှောခြင်းသည်ငါးနှင့်အခြားမွေးမြူရေးအစာထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများအတွက်ကောင်းမွန်သောအစာရောနှောခြင်းဖြစ်သည်.
feed mixer ၏အင်္ဂါရပ်များ
1. မြင့်မားသောတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း: ဒီလိုမျိုးရိုးတံအစာရောနှောခြင်းပုံစံက convection ကိုအားဖြည့်ပေးတယ်, ညှပ်, နှင့်ဆိုးကျိုးများရောစပ်.
2. အလယ်အလတ်ရောစပ်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောတူညီခြင်း, အသားအရောင်ခွဲခြားမှုမရှိ.
3. လူ့ဖော်ရွေ: ရိုးရှင်းပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖွဲ့စည်းပုံ, အဆင်ပြေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, စိတ်ချရသော, အန္တရာယ်ကင်း, ထိရောက်သောနှင့်လျော့နည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု. အစာရောနှောစက်ကိုလည်းအပူပေးစက်နှင့်အအေးခံပစ္စည်းများအတွက်အကျီများတပ်ဆင်ထားသည်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, လိုအပ်သောအဖြစ်အပူ insulator တွင်လည်းပစ္စည်းများလည်းတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်.
4. လျှောက်လွှာမျိုးစုံ: ဒီကျွဲနွားအရောနှောအစာကျွေးခြင်းရောနှောများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်, အစားအစာများ, စာ, ဆီလီကွန်ရာဘာ, ခြယ်ပစ္စည်း, ပုံနှိပ်မင်, ဖယောင်း, ဗဓေလသစ်, မုန့်ပျောက်ကွယ်သွားသည်, ဆီမွှေး, ဆပ်ပြာ, စသည်တို့; ပါ ၀ င်သည့်အရည်နှင့်အထူများကိုရောစပ်ရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်, pasty နှင့် granular ပစ္စည်းများ.
5. ရောစပ်အသုံးပြုသည်: အမှုန့်နှင့်အတူအမှုန့်; အရည်နှင့်အတူအမှုန့်
6. အကြီးစားပွင့်လင်း layout ကို, အမြန် feed ကို, အနည်းငယ်ကျန်ကြွင်း, အရည်ဖြည့်စွက်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်.
Feed Mixer စက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း
the ရောနှောခြင်းပြီးနောက်, ပြောင်းပြန်လှည့်ကိုရှောင်ရှားရန်၎င်း၏အချိန်ကိုက်လမ်းကြောင်းကိုစစ်ဆေးပါ.
using အတွက်အသုံးပြုပြီးနောက် 15 ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ရက်ပေါင်း, ချောဆီကိုလွှတ်ပေးပြီးဆီတိုင်ကီကိုသန့်ရှင်းပါ; သုံးလတစ်ကြိမ်အမြန်နှုန်းလျှော့ချသည့်စက်ဆီချောဆီကိုလဲပြောင်းပါ, နှင့်နှစ်လတိုင်း bearing မှအမဲဆီဖြည့်ပါ.
the ရောနှောခြင်း၏အသေးစားပြုပြင်မှုကိုလိုအပ်သည် 1800 နာရီ '' ပုံမှန်ပြေး, အဓိကအားဖြင့်ချောဆီကိုစစ်ဆေးရန်သို့မဟုတ်အဝတ်အစားအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးရန်; ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်လိုအပ်သည် 4000 နာရီ '' ပုံမှန်ပြေး, အဓိကအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်သန့်ရှင်းစေရန်ဖြုတ်တပ်ရန်ဖြစ်သည်, အားလုံးဝတ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်စံအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးသို့မဟုတ်ဖြေရှင်းပေးရန်.
3 150ကီလိုဂရမ် / အသုတ်
5~ 8min / သုတ်
4 250ကီလိုဂရမ် / အသုတ်
10~ 15 မိနစ် / အသုတ်
5.5 500ကီလိုဂရမ် / အသုတ်
7.5 1000ကီလိုဂရမ် / အသုတ်
15~ 20 မိနစ် / အသုတ်
15 2000ကီလိုဂရမ် / အသုတ်